Waraanaan Uummata Ukkaamseen Bara-Baraaf Haangorra Jiraadhaan Wayyaanee Habjuu Hin Milkoofne! -
By fmegersa | March 16, 2018
Baarentuu Gadaa Irraa, Bitootessa 16, 2018
March 14, 2018, Moyale, Oromia Region, residents fled to Kenya after the Ethiopian regime indiscriminate massacre
Mootummaan kijibaa;Mootummaan Wayyaanee/EPRDF kufaatiin isaa, xumurri sirna isaa dhihaachuu kan dhugoonfate ykn hubate ta’uu isaaf ragaalee adda addaa hedduu tarreessuutu danda’ama. Labsii yeroo muddamaa yeroo3f dhiheenya kana hojiira olche dabalatee holola dhaboleen jalee sirnichaa ta’anii fi sirnichaan bixxiilaman kanneen akka OPDO,DHDN,BADN fi maxxantoonni ergamtoonni naannolee bulchaa jirra jedhan akka fakkeenyaatti kaafnee ilaaluu dandeenya. Ergamtoonni kun waggaa 26 oliif wayyaaneef hojjechaa, wayyaanee waliin ummata dararaa fi saamaa turanii har’a gahanii kan uummata cunqurfamaaf aantummaa qaban fakkaatanii yoo hololanii fi gaafii ummataa deebisaa jirra, deebisuuf jirra, jedhan argaa fi dhagahaa jirra. kun ammoo shakki malee sirnichi kufaatii jala gahuu fi dhiphuu itti buleerraayis gama tokkoon holola fakkeessii gaggeessaa gama biraan waraana bobbaasee ajjeechaa raawwachuun gaafii uummataa ukkamsee bara bittaa fi saamichaa dheereffachuuf yaalii dhumaa gochaajiraachuu argisiisa.
Har’a Impaayerri Itiyoophiyaa Wayyaaneen bulaa jirtu akkuma hunduu quba qabutti ibiddarra jirti. Dhiphuu guddaatu biyya sana keessa jira. Qabsoon Oromoo,FXG qeerroon gaggeeffamaa jiru bulchiinsa Wayyaaneetti guyyaa dukkanneesseera. Labsii yeroo muddamaa si’a 3f baasee yaalii isa xumuraa godhus harkaa fashalaa jira. Hojiira oolaa hin jiru. labsiin 3n kunis akkuma labsii bara darbee baatii 9f turee milkii malee hafaa jira. Ummanni Oromoo addatti ilmaan isaa qeerroon labsii Wayyaanee kana cabasanii Fincila finiinsaa jiru. dhiphuu qabsoon, FXG itti bulcheenis mootummaan abbaa irree Wayyaanee /EPRDF dhukaasa jumlaa banee ajjeechaa sukanneessaa iddoo gara garaatti raawwachaa jira.
Har’a murni TPLF jedhee of waamu kun labsii yeroo muddamaa paarlaamaan fakkeessii isaattillee harkatti kufise qabatee uummata Oromoo irratti duula banee gooluuf /ukkaamsuuf yaalulleen akka yaade hin taaneefi.
Uummanni Oromoo addatti qeerroon ilmaan isaa kan yeroo kamiituu caalaa irree tokkoon waraana sirnichaa dura dhaabbatanii ofii wareegamaa uummata Oromoo ibsaa jiru. Karoorri sirnichi humrii isaa dheerafchuuf karoorfate fashalaa jira. Waraanni sirnichaa dhiphuu qabsoon Oromoo itti bulcheen ajjeechaa sukanneessaa asii fi achitti raawwatus qabsoon uummanni Oromoo bilisummmaa isaaf taasisaa turee fi jiru iddoo hundattuu cimee, finiinee itti fufeera. Akka injifannoon xumuramus shakkiin hin jiru.
Gaafin uummanni Oromoo kaasaa turee fi jiru kun akka Wayyaanee fi jala deemtonni isaanii hololaa turanii fi jiran diddaa, fincila gaafii bulchiinsa gaarii waliin walqabatuu miti, gaafiin Oromoo gaafii gaafii bu’uuraalee misoomaa dhabuurraa maddus miti. Gaafiin Oromoo gaafii mirgaati.Oromoon koloneeffattoonni narraa haa ka’an, abbaan biyyummaa koo naaf haa deebi’u jechaa jira. Mirga uumamaa fi dimookiraasii isaaf wareegama baasaa ture, baasaa jira. Gaafiin akkasii ammoo asqabii fi achi qabii hin qabu.
Diddaan,Gaafiin hara’a mootummaa abbaa irree Wayyaanee/EPRDf irratti ka’e gaafii, diddaa salphaa miti. Gaafii fakkeessii fi hololaan akka salphaatti furamus miti. Diddaan uummata Oromoo fi Wayyaanee gidduu jiru diddaa gongumaa hin araaramnee dha. Diddaan diddaa gabroonftaa fi uummata gabrummaa jalaa bahuuf qabsoo gaggeessaa jiruu ti. Diddaan, Qabsoon ABO/WBOn Gaggeeffamu, FXGn yeroo ammaa kana gutummaa Oromiyaatti finiinaa jiru kun ammoo kan furmaata argatu gaafa mirgi abbaa biyyummaa Oromoo dhugumaan kabajame, gaafa Oromoon bilisummaa isaa argatee dha. Gaafii Oromoo kana gongumaa asiif achi jallisanii, falli,ykn furmaanni siyaasaa Impaayeera Itiyoophiyaa keessatti dhufu hin jiru.
Uummata Oromoo mirga isaa, mirga uumamaa fi dimookiraasiin qabu kabachiifachuuf dhiigaa, cabaa fi dararamaa turee fi jiru kana gongumaa sobaa fi sossobaadhaan, hidhaa fi ajjeechadhaan callisiisuun hin danda’amu. Sirna gabroonfataa akka Wayyaanee kana jalattis Ballaxaa kaasuun Caalaa muuduun, ykn Teklee kaasanii Fayyisaa Aangorra kaa’uun fala hin ta’u. Gaafii Oromoo waraana bobbaasuun uummata meesha maleeyyii fixuudhaanis gongumaa ukkaamsuun hin danda’amu. Muddama amma jiru hanqisees gafii bu’uuraa hin hiiku.
Dhugaan amma lafarra jiru kan argisiisuus Oromoon maaliyyuu yoo dhufe mirga dhugaa, mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifatu malee akka qabsoo,FXG gaggeessaa jirurraa kan duubatti hin deebine ta’uudha.
Gaafiin Oromoo jijjirama sirnaati. Qabsoon, FXG kan gaggeeffamaa turee fi jiruuf gabroonfataa bakkaa buqqisanii mootummaa dimookiraatawaa, mootummaa ofii qabaachuufi. Mirga abbaa biyyummaa dhugoonfachuufi, mirga dimookiraasii fi uummamaa hojiira olfachuuf qabsaawamaa jira. Kanuma dhugoomsuuf ilmaan isaa qabsaawoonni,qeerroon dhiigaa, wareegama qaalii kaffalaa turani.
Wayyaaneen gaafii bu’uuraa, gaafii haqaa kana uukkaamsuuf jecha waggoota 27n darbaniif uummata Oromoo addatti sabboontota ilmaan isaa hidhaa, dararaa fi ajjeesaa ture. Har’alleen kan yaalamaa jiru kanuma. Maqaa labsii yeroo muddamaatiin waraanni bobbaafame Moyyaaleetti, Shaashammneetti, Holototti, Amboo,Gudar,Harargee magaaloota adda addaa keessatti, Naqamtee, Gimbii, Najjoo fi Dambii dolootti nama fixaa turuu fi jiraachuu dhageenyee jirra. Haa ta’uutii yaanni wayyaanee inni qawween uummata callisiisuu milkaawuu hin dandeenye. Qabsoon,FXG iddoo marattu jabaatee itti fufee sirnicha raasaa jira.
Sirna gabroonfataan waggoota 27f gateettii ummattoota biyyattii irratti g qabsoo Oromootiin akka cabbii Aduun itti bahee baqaa jira.
Diinni jabaa fakkaatee afaaniin hololus hidhanoo hiikkatee baqachaa jira. Kufaatii jalaan gaheera. Qabsoo eegalame FXG finiinee itti fufnaan yeroo gabaabaa keessattis sirn abbaa irree Wayyaanee/EPRDF kun akka burkutaayee badu shakkiin hin jiru. kanuma hubachuunis hunduu bakka jiruu qabsoo isaa,FXG eegale jabeessee itti haa fufuun Fala Filannoo Hin qabnee dha!
← OROMOOF DHIMMUU HOJIIN MUL’ISUU BARBAACHISA. Seife Nebelbal Radio, March 16, 2018 Oromo News in Amharic →